Global Voices teny Malagasy » Translator Newsletter: SEO tsotsotra, Fampiharana fandikan-teny ho an’ny marenina ary tantara hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jolay 2019 20:38 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Ho fanamarihana ny fifidianana amerikana amin'izao fotoana izao (fantatro, fa angamba niresaka be momba izany ianao. Saingy tsy maintsy misisika amin'ny zavatra kely aho alohan'ny hifaranan'izany rehetra izany!), Nihevitra aho fa mety mahaliana ny manondro ity lahatsoratra ity,  izay navoakan'ny Quartz mikasika ny fandikana ny lahatenin'i Donald Trump sy ny fahasarotana tamin'ny fandikana izany. Manoratra i Lila MacLellan,
“Ny fiteniny NSFW, ny fahadisoan-teny, ny hirany mankany amin'ny bémol , ary ny fivadibadihan'ny fanjohin-kevitra no nahasanganehana ireo mpandikateny manerana izao tontolo izao.”
Ahoana anefa no ahazoantsika antoka fa manana fisiana tsara indrindra antserasera isika? Corinne McKay ao amin'ny Thoughts on Translation manome antsika fomba fijery fototra momba ny fanombohana ny SEO sy ny fomba ahafahantsika manatsara ny fisiana antserasera. Fantaro ato  ny mikasika izany rehetra izany!
Naheno ny tsirairay, tamin'ny fotoana iray na hafa, fa mianatra fiteny haingana kokoa noho ny olon-dehibe ny ankizy. Saingy marina ve izany? Milaza ny manam-pahaizana fa angamba tsy izany! Emma Brancatisano tao amin'ny Huffington Post, namoaka lahatsoratra mahatalanjona antsoina hoe “Tena sarotra tokoa ve ny mianatra fiteny iray rehefa antitra ianao?  izay mitodika any amin'ny manam-pahaizana mba handinika ny votoatin'ity fanontaniana ity. Ho anareo izay nianatra fiteny efa olon-dehibe, ahoana ny hevitrao? Misy fahamarinane ve ao amin'izany?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/02/140682/
 ity lahatsoratra ity,: http://qz.com/817886/i-pursued-her-like-a-strumpet-the-hazards-of-translating-trump-into-foreign-languages/
 Tena sarotra tokoa ve ny mianatra fiteny iray rehefa antitra ianao?: http://www.huffingtonpost.com.au/2016/10/21/is-it-actually-harder-to-learn-a-language-when-youre-older/
 ato : https://globalvoices.org/lingua/translator-application-form/